Monday September 24, 2018 - 20:58:36 in Wararka by Super Admin
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa cagta mariyey xero ciidan oo ku taalla gobolka Lamu ee dhaca xeebaha Kenya, islamarkaana dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan military-ga Kenya.
SAWIR: Meydadka ciidamada Kenya ee lagu dilay Kamiin ka dhacay Lamu, Aug 29, 2018
Xarakada Al-Shabaab ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in dagaalyahanadooda ay weerar ballaaran ku qaadeen xero ciidan oo ku taalla deegaanka lagu magacaabo Takhsiile oo ka tirsan gobolka Lamu.
Sarkaal u hadlay Al-Shabaab ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in dagaalyahanadooda ay cagta mariyeen xerada ciidamada Kenya ee deegaanka Takhsiile, ayna halkaas ku dileen ugu yaraan 10 askari, halka sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal.
Sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay badankood isaga kala firxadeen xerada, balse ay nolosha ku qabteen saddex askari oo dhaawac ah kuwaas oo looga kala cararay xerada.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sarkaalkan sheegay in Mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen xerada, ayna soo ganiimeysteen hubkii iyo agabkii yaallay.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay in dhankooda saddex askari ay kaga shahiideen weerarkaas sida uu sheegay Sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta oo la
hadlay Idaacadda Islaamiga Andalus.
Waa markii ugu horeysay oo ay dagaalyahanada Al-Shabaab cagta mariyaan xero ciidan oo ku taalla gudaha Kenya.
Xarakada ayaa dhowrjeer cagta u marisay saldhigyo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya, iyadoona midkii ugu dambeeyey uu ahaa duullaankii lagu qaaday xerada Kulbiyow balse weerarkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyey ee noociisa ah oo ay ka fuliyaan gudaha Kenya.